2011-12-18 ~ Myanmar Express
အပြစ်မဲ့အရပ်သားများအား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) မှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
မြစ်ကြီးနား၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃KIA အဖွဲ့အနေဖြင့် အစိုးရနှင့်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တည်ဆောက်ထားသော လမ်း၊ တံတား၊ တာဝါတိုင်များကို မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ KIA အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အစိုးရတပ်များကို များစွာမထိခိုက်သော်လည်း ဒေသခံပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးကို အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ အတင်းအဓ္ဓမ လူသစ် စုဆောင်းခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးများကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း စတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရသော ကာမိုင်းမြို့နယ်၊ မအူပင်ကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှုး ဦးမြင့်စိုး ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်က တပ်မဟာ ၃ ၊ တပ်ရင်း ၂၇ မှ ဗိုလ်ကြီး လဒွဲ ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့သည် မန်စီမြို့နယ်၊ ဟန်ထက်ရွာမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း ဦးသိန်းမောင်နှင့် လက်ရှိကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်ရွှင်တို့အား ကြိုးတုပ်ပြီး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။ KIAမှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အများစုမှာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံရသဖြင့် ၄င်းမိသားစုများက စိုးရိမ်လျှက်ရှိပါသည်။ ဟန်ထက်ကျေးရွာမှ မျက်မြင်တစ်ဦးမှ " KIA အဖွဲ့တွေက အရပ်ဝတ်နဲ့ ရွာထဲကို ၀င်လာတာ၊ နောက်တော့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို အိမ်ပေါ်ကနေ အတင်းဆွဲချပြီး ကြိုးတုပ်တော့တာပဲ၊ သူတို့က သေနတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူမှလည်း ၀င်မဆွဲရဲဘူး။ ကြိုးတုပ်နေရင်းနဲ့ ဦးသိန်းမောင်က ရုန်းတော့ ခြေထောက်နဲ့ မျက်နှာကို ၀ိုင်းကန်ကြတယ်။ ခုလိုခေါ်သွားခံရတဲ့လူ အများစုကတော့ ရွာကို ပြန်ရောက်မလာကြပါဘူး။ နောက် ၂/၃ ရက်လောက်နေလို့မှ ပြန်ရောက်မလာတော့ရင်၊ တောထဲမှာ သေနေတာကိုပဲ တွေ့ရတာပါ " လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ " လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကို အနိုင်ကျင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေတာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီး စစ်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲလို့ " ဒေသခံ ကချင်လူမျိုးတစ်ဦင်္းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Credit : KDN Myanmar Express
အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ် - ၄ (မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၂-)(အောင်မိုးဝင်း))
by Maung Maung Wann မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၂-)ခုခံချေပချင်သူတွေဘက်မှ ကျောင်းသားတယောက်ကနေ ဖေ့ဘွတ်မှာ မှတ်ချက်တခုပေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ “ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဒီကိစ္စ ကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ လုပ်နေတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းသိင်္ခ ရဲ့ မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော ဝတ္ထုထဲက စကားလို၊ “ အိုင်ပီ အောင်သင်းရေ- ဒီ ကွင်းဆက် က စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပဲဗျ၊ ဇာတ်လမ်းကတော့ အထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်လာပြီဗျို့” လို့ ပြောရမလို ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာလည်း “ အဲ့ဒီ တာဝန်ရှိသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဘဝမှာ တခါတလေလောက်တော့ ပြန်ပြီး အမဲလိုက်ကြည့်ချင်စိတ်က ပေါ်နေတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတခုပြောပြမယ်ဗျာ။မသတ်ရသေးပဲ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ကျောင်းသား (၅၀) ကျော် အကျဉ်းထောင်က ဖောက်ထွက် လွတ်မြောက်သွားပြီ ဆိုတာ ကို သိလိုက်တဲ့ “မျိုးဝင်း” ဟာ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသွားပြီး “ ဟာကွာ ငါ့ဘဝတော့ သွားပါပြီ” လို့ ငြီးငြူတယ်ဆိုပဲ။ သူမတရားသဖြင့် နှိပ်စက်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာမြေဟာ စတင်မီးလောင်ပြီးပြိုကျနေပြီ။ သိတ်မကြာဘူး။ အကုသိုလ်ကံက သူ့နောက်ကို လိုက်ပါလာတယ်။ နောက်ကျည်ထိ သေဆုံးသွားတယ်။ (တချို့ကတော့ နှုတ်ပိတ်ခံရတယ် လို့ ဆိုတယ်) တကယ်တော့ သူ့ကို မသေစေချင်ပါဘူး။ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ အဲ့သလို မြန်မြန်အသက်ထွက်သွားတာ မတန်လိုက်တာဗျာ။ တကယ်ဆို သံချောင်းလိုပဲ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ကြိုးမိန့် (၅) ခါလောက်ကျရမှာ။ အင်း- ရော်နယ် အောင်နိုင် ကတော့ ဒီကိစ္စတွေကို ဘယ်သူ တာဝန်ခံဖြေရှင်းမှာလဲ။ အဖွဲ့ကို ဖျက်ပစ်မှဖြစ်မယ် လို့ အကြံပေးသတဲ့။ ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ရဲ့ သမိုင်းကို ခြေရာဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူတွေက သွေးရောတကယ်ရှိလို့လား။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။ “ ဟော့ဒီ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်မှုကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမလဲ” ဆိုတဲ့အချက် ကိုပေါ့။ နေပါအုံး။ တာဝန်ရှိသူတွေထဲမှာ “ လှဆိုင် ( ကချင်သံဝဲဝဲနဲ့ပြောရရင် လှဆောင် ပေါ့ဗျာ) ဆိုတဲ့သူရောပါမလား။ သူက တရုပ်နယ်စပ်မှာ ဇာတ်မြှုပ်နေနေသူ လို့ သိရတယ်။ အာသံကုန်းမှာ မျိုးဝင်းနဲ့အတူ ကျောင်းသားတွေကို ဓါးနဲ့အပိုင်းပိုင်းခုတ်သတ်ခဲ့သူ လို့ နာမည်ကြီးတာပဲ။ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဒီလောက် ဘီလူးသရဲစီးနေတဲ့ နှလုံးသား ဘယ်လို ဆဲလ်နဲ့များဖွဲ့စည်းထားသလဲ လို့ပါ။ (က)ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်ရေးတဲ့အခါ ခံစားမှုပြင်းထန်စွာနဲ့ ဝင်ရောက်မှတ်ချက်တွေရေးပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့ကို အနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံ ချင်တာတခုရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ရဲဘော်တွေကို ထိခိုက်စေမဲ့ ပြီးစလွယ်ကောက်ချက်ချမှုတွေကို ရှောင်ကျဉ်စေချင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေက မိဘတွေနဲ့အတူနေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေမှာပျော်ပါး၊ စီးပွားရေးလုပ်၊ ဘဝရဲ့အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်နေကြချိန်မှာ၊ အေဘီရဲဘော်တွေဟာ ငှက်ဖျားတောထဲမှာ ဘဝကို စတေးပြီး တိုင်းပြည်ကိုချစ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိက ဘဝတွေစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြရတယ်။ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ နားလည်မှုတခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဘဝပေါင်းများစွာပေးဆပ်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် နေဝင်း၊ သန်းရွှေ ဖက်ဆစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ အေဘီအပါအဝင်၊ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင်သူတွေရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေကို အသိအမှတ်မပြုချင်နေပါ။ ထိခိုက်စော်ကားစေတဲ့ စကားလုံးတွေ မပေးစေချင်ပါဘူး။ လူတစုရဲ့ သွေးစွန်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို ကြည့်ပြီး၊ ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆိုတာ ဒီလိုရက်စက်သလား ဘာညာ အတွေးတွေ မတွေးစေချင်ပါ။ သူတို့တတွေဟာ နှလုံးသားတွေထိခိုက်ခံစားလွယ်လို့၊ တိုင်းပြည်ထဲက ပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေက လွတ်မြောက်စေဖို့အတွက် တောခိုလက်နက်ကိုင်ကြတယ်၊ ဘဝကိုမြှုပ်နှံစတေးခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံစေချင်ပါ။ ရဲဘော်တွေက ရိုးသားချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဆိုတာ ဒင်္ဂါးပြားတခုရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းလို ပဲ၊ ခွဲခြားမရပါဘူး။ ဒီလိုခွဲမရတဲ့ ညီညွတ်မှုကို အိပ်မက်ဆိုးတွေကြားမှာ သတ်ပစ်ချင်တဲ့ လူတစုကတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် လို မန္တလေး ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ၊ ညီလာခံက တရားဝင်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်အပါအဝင်၊ ကျောင်းသား (၃၀) နီးပါးကို သတ်ဖြတ်ပြလိုက်ပြီး၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ကျောင်းသားတွေကြားမှာ ခါးခါးသီးသီး နာကျင်မှုတခုဖြစ်သွားအောင် ကြံစည်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်ပဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးကျောင်းသားထုဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကို အမှုန့်ချေပစ်နေချင်ကြတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းမှုဆိုတာ စိတ်ကွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ ပြဿနာတွေကို သတိတရားနဲ့ချည်းကပ် အဖြေရှာကြည့်ကြမယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေကြား အက်ကွဲကြောင်းတွေ၊ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ထင်အောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို စမ်းစစ်ကြည့်ကြမယ်။ ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်အထိ၊ ကျနော်ဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော်တွေနဲ့ ခံစားချက်တူ၊ ရည်ရွယ်ချက်တူ တည်ရှိနေမယ်။ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ (၇၀၁) တပ်ရင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်တုံးက ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်၊ မန္တလေးမြို့ မျက်ပါးရပ် စစ်တပ်နားမှာ စာရွက်တွေဝေခဲ့ဘူးခဲ့တယ်။ မန္တလေးမြို့ကို ကျောင်းသားတပ်မတော် နဲ့အတူပြန်လာမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှော်ခဲ့ဘူးတယ်။(ခ) အဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ပြတဲ့အခါ၊ လူတိုင်းမှာ လက်ခံပိုင်ခွင့်၊ ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လူတွေအားလုံးမှာ သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကို တင်ပြနိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်းတခုရရှိထားကြပြီးသားပါ။ မြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ဒေသမှာ လုပ်သွားခဲ့သလိုမျိုး၊ ဝန်မခံရင် နှိပ်စက်၊ နှုတ်တိုက်သင်ပေးထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့ ဇွတ်အတင်း၊ အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့ အလုပ်မျိုး၊ စွပ်စွဲချက်မျိုးတွေကို၊ ကျနော်တို့ မလုပ်ပါဘူး။ ခုခံချေပချင်တဲ့သူတွေမှာလည်း ချေပပိုင်ခွင့်ရှိစေ ရပါမယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း နားထောင်ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေ မပြည့်စုံဘူး ဆိုရင်လည်း ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အသင့်ပါ။“ဒါတွေဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ကျောင်းသားချင်း ဒီလိုလုပ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား” လို့ သံသယနဲ့ကောက်ချက်ချသူ တယောက်ရဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျနော်သဘောကျမိပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကျနော်တို့ဘက်က ပြန်လည်မေးမဲ့ မေးခွန်းတခု ကို ဖြေဖို့ အသင့်ပြင်ထားပေးပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်၊ ကျောင်းသားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေဟာ ကျောင်းသားဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ လူသတ်မှုကို ယဉ်ပါးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ ( စံနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား)။ မန္တလေးသားတွေက မေးခွန်း( ၃) ခု နဲ့ စောင့်နေပါ့မယ်။(၁) ကျောင်းသားချင်းသတ်တာလား(၂) ကျောင်းသားတွေက စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို သတ်တာလား(၃) စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကျောင်းသားတွေကို သတ်တာလားဇာတ်လမ်းတခုလုံး ဇာတ်ရည်လည်လာတဲ့အခါကျရင် ဒီမေးခွန်းသုံးခုထဲက တခုခုကို စာဖတ်သူတွေ ဖြေနိုင်ကြမှာပါ။ (ဂ)ဒီကိစ္စကို ကျနော်က ဦးဆောင်ပြောပြနေတာ ကျနော့မှာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ မျိုးဝင်း ( မိုးညှင်း) ဆိုတာ ကျနော်တို့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်သလို၊ သမိုင်းဆောင် အတူတကွ နေထိုင်ပျော်ပါးခဲ့ကြဘူးသူတွေပါ။ သမိုင်းဆောင်မှာကတည်းက သွေးဆာပြီး လက်ယဉ်လေ့ရှိတဲ့ မျိုးဝင်း တယောက် အရေးတော်ပုံအပြီး၊ မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတယ် ဆိုတော့ ဘုရားတလိုက်မိတယ်။ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်မရှိတဲ့ လူမိုက်တွေ လက်နက်ကိုင်တဲ့အခါ၊ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ အကြမ်းဖက်သမား၊ ဓါးပြဂိုဏ်းလောက်သာဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူရှိနေတဲ့ မြောက်ပိုင်းကို သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတခါမှ မတွေးခဲ့ပါဘူး။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ရော်နယ်အောင်နိုင်၊ ကိုစိုးလင်း ( အေဘီ ဗဟိုမှာ ဖမ်းဆီးခံရသူ) သုံးယာက်က မန္တလေးသားတွေပါ။ ခုတော့- ရော်နယ်အောင်နိုင် တယောက်သာ မဲဆောက်မှာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး၊ ပါတီပွဲတွေမှာ သောက်စားမူးယစ် အဆီယစ် ရီဝေနေတဲ့ မျက်နှာကြီးကို ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ရ၊ ဖေ့ဘွတ်မှာ မိန်းကလေးတွေကို အီစကလီ စာလေးတွေ လိုက်ရေးနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော် ( ဗကသ-အထက်ဗမာပြည် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်၊ မြောက်ပိုင်း-ဥက္ကဋ္ဌ) က အသတ်ခံရ၊ ကိုစိုးလင်းက မန္တလေးကို ပြန်လည်ထွက်ပြေးလာရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရက ၁၉၉၂ ဇွန်လ(၃) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်။ ( မပူပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ အစိုးရရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ ကျနော်ပြောနေတဲ့အချက်အလက်တွေ ဘယ်သူက မှန်သလဲ ဘယ်သူက ပိုပြီး အသေးစိတ်လဲ ဆိုတာ သိရဖို့ ယှဉ်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်။ Far Eastern Economic Review ( ၁၉၉၂ ဂျူလိုင် ၁၆) မှာပါတဲ့ Bertil Lintner ရဲ့ Loss of innocence ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ဖတ်ကြရမှာပါ။ ) စစ်အစိုးရဆိုတာ ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့ ကျနော်တို့က သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးဆောင်းပါးတွေ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကို အရေးလုပ်ဖတ်လေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့က မြစ်ထဲရေရှိတယ်ပြောနေရင်တောင်မှ ပြေးပြီးကြည့်ရအုံးမှာပါ။ တလျှောက်လုံးလိမ်ဆင်တွေပဲ ပြောနေတော့၊ သူတို့ဘာပြောပြော ယုံကိုမယုံခဲ့တာပါ။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆီက ရတာလား လို့ နာမည်ဝှက်သုံးပြီး အပေါစားပျက်လုံး နဲ့ အောက်ဖဲ နဲ့ လာရှိုးနေသူတွေကို တခုပဲပြောလိုက်ပါရစေ။ ကျနော့အကြောင်းသိချင်ရင်၊ ABSDF မိုးညှင်းအုပ်စု က RIT ကျောင်းသာတွေကို မေးကြည့်လိုက်ပါ လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ မျိုးဝင်းဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ သေသွားတော့ ထားလိုက်ပါတော့။ ဘယ်ကရလဲ သိချင်ရင် စိတ်မလောပါနဲ့။ သိလာရပါစေမယ် လို့ ဖြေထားပါရစေ။ တခုတော့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ တခါတုံးက ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင်တွေကို ထောက်ခံခဲ့သူတွေဟာ အခုချိန်မှာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီး ဖြောင့်ချက်တွေပေးထားခဲ့တယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေမလဲ။(ဃ)ထောက်လှမ်ရေးလို့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင်လာတော့လည်း စစ်အစိုးရက ဖမ်းပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေချခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ပါဂျောင်ဒေသမှာတုံးက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ဝင်ရောက်နှိပ်စက် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့၊ လက်နက်မှုနဲ့ကျတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်တချို့ကတော့ ထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်လောက်နေရပြီး၊ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းပြန်လာတက်ကြပြန်တယ်။ သူတို့ကလည်း မိုးညှင်းဘက်က ကျနော့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ စက်မှုမေဂျာ က တယောက်ဆို၊ “နန်းစော” ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်၊ ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ထဲမှာ ပါခဲ့သေးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို စတင်ခြေရာခံလိုက်ခဲ့မိတော့တယ်။ စစ်ကြောရေးစခန်းက ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေရော၊ စစ်ကြောရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေရော၊ နှစ်ဘက်လုံးက ကျနော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးက ရင်ဖွင့်သံတွေကို ရင်နာနာ နားထောင်ခဲ့ရတော့တယ်။ “ဘုရားရေ- ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ” လို့ တနေခဲ့ရတယ်။ တကယ်တော့ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရသည့် (၁၅) ယောက်အပြင်၊ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက် လို့ သေဆုံးသွားခဲ့သူ (၁၄) ယောက်ရှိပါတယ်- နောက်ပိုင်းမှာ နာမည်တွေကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ကဲ- ဟော့ဒီ စာရင်းတွေကရော၊ အစိုးရထောက်လှမ်းရေးဆီက ရတယ်လို့ ပြောချင်ပါသေးလား။ ခံခဲ့ရခဲ့သူတွေက ဘယ်မှာ မေ့နိုင်မှာလဲ။ လူတိုင်းမှာ ဝှက်ဖဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ဖို့လိုတယ်။ထောက်လှမ်းရေး သူလျှို လို့ စွပ်စွဲပြီး တာဝန်ခံဖမ်းဆီးသူတွေကတော့(၁) ဗိုလ်မှူးသံချောင်း (ခ) မြင့်စိုး ( ဗဟိုစစ်ရေးတာဝန်ခံ)(၂) အတွင်းရေးမှူး အောင်နိုင် ( ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရာထူးတိုးမြင့်ခံခဲ့ရသည်)(၃) ဗိုလ်ကြီး မျိုးဝင်း ( တွဲဘက် အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး-တစ်-၊ ဒု -စစ်ရေးတာဝန်ခံ ) မိုးညှင်း- နန်းမား(၄) တပ်ကြပ်ကြီး သန်းဇော် ( မန္တလေး- ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ခံ)(၅) တပ်ကြပ်ကြီး ဇော်ဇော်မင်း ( မိုးညှင်း- ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး)(၆) ဒုတပ်ကြပ် အောင်စိုးမြင့် ( မိုးညှင်း- ဗဟို ထောက်လှမ်းရေး)(၇) တပ်ကြပ်ကြီး ကျော်ထင်ဦး ( မိုးညှင်း- ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး)(၈) ရဲဘော် မောင်ထွေး ( ဗန်းမော်)(၉) ရဲဘော် ဖိုးနှောင်း ( ဗန်းမော်)(၁၀) ရဲဘော် သက်လင်း ( ဗန်းမော်)စစ်ကြောရေးအဖွဲ့ဝင်များ(၁) လှဆိုင်း ( မြစ်ကြီးနား) တွဲဘက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး -၂အာသံကုန်း ခေါင်းဖြတ်ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဓါးကိုင်ပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ လှဆိုင်း ( လှဆောင်) ဆိုသူဟာ တရုပ်နယ်စပ်မှာ ဇာတ်မြှုပ်နေနေတယ် လို့ သိရတယ်။ (၂) စိန်အေး ( မိုးညှင်း- ကချင်ဒေသ ခရိုင်မှူး)(၃) အောင်သန်း (မိုးညှင်း ( ၇၀၁ ) တပ်ရင်းမှူး)(၄) သက်ထွန်း ( မိုးညှင်း တပ်ခွဲမှူး)(၅) စောရင်ထွေး ( ရွှေကူ တပ်ခွဲမှူး)(၆) သိုက်ထွန်းဦး ( ရန်ကုန်- ၅၀၁ တပ်ရင်းမှူး)(၇) ရဲလင်း ( ရန်ကုန်- ရန်ကုန်ဒေသ ခရိုင်မှူး ( သူလည်း ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် ဖမ်းခံရပြန်တယ်)(၈) ညီညီကျော်- ( မန္တလေး- မန္တလေး ဒေသခရိုင်မှူး) ( ထောက်လှမ်းရေးအဖြစ် ဖမ်းခံရပြန်တယ်)ထောင်မှူးတာဝန်ခံများ(၁) ဒုအရာခံဗိုလ် အောင်မင်း ( မိုးညှင်း)တပ်ကြပ်ကြီး ထိန်လွန် ( ဗန်းမော်)(၂) တပ်ကြပ်ကြီး အေးမောင် ( မိုးညှင်း)ရဲဘော် လက်သီး(၃) တပ်ကြပ်ကြီး တာတီး ( မိုးညှင်း)တပ်ကြပ်ကြီး စောမြမောင်(၄) တပ်ကြပ်ကြီး လှမျိုးအောင် ( မိုးညှင်း- တာဝန်ပေါ့လျော့မှုဖြင့် သေဒဏ်ချ သတ်ဖြတ်ခံရသည်)ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား (၁၅) ယောက်အပြင်၊ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ လူမဆန်သည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲဘော် (၁၄) ယောက်ကတော့ (၁) ရဲဘော် စိုးမင်းအောင်(၂) ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးစိန်(၃) ရဲဘော် ပြည့်စိုးနိုင် ( ရန်ကုန်)(၄) ရဲဘော် အေးကျော်(၅) ရဲဘော် ကျော်ဋ္ဌေး(၆) ရဲဘော်ကျော်ကျော်ဦး(၇) ဒုအရာခံဗိုလ် အောင်ကိုး ( ဗန်းမော်)(၈) တပ်ကြပ်ကြီး ဇော်ဝင်းချစ် (ဗန်းမော်)(၉) ဗဟိုကော်မတီဝင် ခင်မောင်အေး (စစ်ကိုင်း)(၁၀) ရဲဘော်တင့်လွင် ( မြစ်ကြီးနား)(၁၁) အောင်မင်း ( မန္တလေး)(၁၂) အရှည်ကြီး ဝင်းသိန်း(၁၃) ရဲဘော် စိုးကြီး(၁၄) ရာကွတ်ဘိုင် ( တရုပ်ပြည်၊ ယင်ကျန်း)ဘာကြောင့် ဒီလို အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ။ ပြဿနာရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဇာတ်လမ်းတခုလုံးကို တတိယပိုင်းမှာ ရေးသွားပါမယ်။ ခုခံချေပ ချင်သူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်း ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ဆိုတာ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေပါ။ “ ဒီအိမ်ပေါ်မှာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်စေသော်” တဲ့ခရစ်စမတ်မှာ မိတ်ဆွေတွေအားလုံး ကံကောင်းကြပါစေ။ Read More
အီရတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်ဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်းတပ်များ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်၍ သမ္မတ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကို ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ရှစ်နှစ် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော ယနေ့အချိန်တွင် အမေရိကန်တပ်များ အားလုံး အီရတ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်တပ်များ ရုပ်သိမ်းသွားသော်လည်း အီရတ်တွင် စိန်ခေါ်မှုများ တသီတတန်းနှင့် ကျန်ခဲ့ လေသည်။ အငြင်းပွားနေသော နယ်မြေပိုင် ဆိုင်မှုများ အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကာ့ဒ် လူမျိုးတို့က အီရန်နယ်စပ်မှ ဆီးရီးယားနယ်စပ်အထိ မြောက်ပိုင်း နယ်မြေတစ်ခုလုံးကို ကာ့ဒ်ပြည် နယ်သုံးခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းလိုသည်။ ဘဂ္ဂဒက်ကလည်း ပြည်နယ်လေးခု၏ အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သော ဒေသနှင့် ရေနံကြွယ်ဝပြီး တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံ နေထိုင်သည့် ကာကွတ် မို့တော်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ကို သူတို့ပိုင်သည်ဟု ပြောနေသည်။ သောင်းကျန်းသူမျိုးစုံနှင့် အယ်လ်ကေဒါများ ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်များတွင် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့သော ဆွန်နီ ဘာသာဝင်တို့၏ သောင်းကျန်းမှုသည် အမေရိကန်စစ်တပ်နှင့် ဆွန်နီဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့အကြား မဟာမိတ်ဖွဲ့ကာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အယ်လ်ကေဒါတို့ကို ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သဖြင့် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ အယ်လ်ကေဒါတို့၏ရှေ့ပြေး အီရတ် အစ္စလာမ်နိုင်ငံတော် အဖွဲ့သည် ရှီးယား ဘာသာဝင်များ၊ ခရစ်ယာန်များနှင့် အီရတ်အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များအပေါ် တိုက် ခိုက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေ ကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းများ အကြားတင်းမာမှုများ ယခုအခါ ရှီးယားဘာသာဝင်တို့ ဦးဆောင်နေသော အီရတ်အစိုးရက ဆွန်နီ ဘာသာဝင်တို့သည် ၎င်းတို့အစိုးရ ပြုတ်ကျအောင် ကျိတ်ကြံနေကြသည် ဟု စွပ်စွဲသည်။ ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ကိုယ်တိုင် ဆွန်နီတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဆွန်နီများသာ ကြီးစိုး လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည်။ ဆီးရီးယား အကျပ်အတည်းပြဿနာ အီရတ်နိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ နှင့် ရှည်လျားသော နယ်နိမိတ်ထိစပ် လျက်ရှိပြီး ဆက်ဒမ် ဟူစိန်၏ ဘာ့သ် ပါတီ၏ အပွားလက်တက်တစ်ခု ဖြစ်သော ဘာ့သ်ပါတီသည် ဆီးရီးယား တွင် အာဏာရအုပ်စိုးနေသည်။ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် လက်ရှိလူနည်းစု ရှီးယား 'အာလာဝိုက်'အစိုးရ ပြုတ်ကျ သွားလျှင် ဒုက္ခသည်များ နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်ပြီး အီရတ် နိုင်ငံထဲသို့ ၀င်ရောက် လာလျှင်အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း ဆွန်နီနှင့် ရှီးယားတို့ကြား တင်းမာမှုမှာ ပိုမို မြင့်တက်သွားနိုင်သည်။ အီရန်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု အီရန်နိုင်ငံသည် အီရတ်အပေါ် အဓိက ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ အီရတ်တောင်ပိုင်းရှိ ရှီးယားစစ်သွေးကြွများကို အီရန်နိုင်ငံက စစ်သင်တန်းပေးခြင်း၊ လက်နက်တပ် ဆင်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု အမေရိကန်တို့၏ စွပ်စွဲချက်ကို အီရန် က ငြင်းသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်ယွင်းမှုနှင့် အားနည်းချက်များ အီရတ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးမရှိပါ။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်မှစ၍ နိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုများ ကြောင့် အမြဲတမ်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တစ်ဦးကို ခန့်အပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အီရတ် အစိုးရဌာနများမှာလည်း အားနည်းပြီး ခြစားမှုများနှင့် ပြည့်နှက် နေသည်။ အီရတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ် တွင်အဂတိလိုက်စားမှု အများဆုံးစာရင်း တွင် နံပါတ် (၈) နေရာတွင် ရှိသည်ဟု Transparency International အဖွဲ့မှဆိုသည်။ ပြည်နယ်အချို့ကလည်း ကာဒစ္စတန် ဒေသကဲ့သို့ပင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုမို ရလိုကြောင်း တောင်းဆိုနေကြသည်။ အီရတ်စစ်တပ်သည် ပြည်တွင်းလုံခြုံ ရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း မိမိနယ်နိမိတ်ကာကွယ်ရေး၊ လေကြောင်း ပိုင်နက်နှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ပိုင်နက်လုံခြုံရေး များကိုမူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တိုင်အောင် တာဝန်ယူနိုင်စွမ်း ရှိဦးမည်မဟုတ်ပါဟု စစ်အရာရှိများက ဆိုသည်။ စွမ်းအင်ပြဿနာ အီရတ်အစိုးရ ၀င်ငွေအများစုကို ရှာပေးနေသော ရေနံထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှု မြင့်တက်နေသော်လည်း ရေနံ လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းမှ ရသည့် ၀င်ငွေ များကို ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်များ အကြား မည်သို့ဖြန့်ဝေမည်ဆိုသည့် ဥပဒေများကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။ လူမှုရေးပြဿနာများ အီရတ်လူဦးရေ၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့် မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေထိုင်ကြရဆဲရှိသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဘက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ ပို၍ ယိုယွင်းကျဆင်းလာသည်။ အီရတ်တွင် ဒုက္ခသည်နှင့် ပြည်တွင်း နေရာ ရွှေ့ပြောင်း ခံကြရသူ ၁ ဒသမ ၇၅ သန်းရှိသည်။ ကာ့ဒ်ခွဲထွက်ရေးသမားများ ကာဒစ္စတန် အလုပ်သမားပါတီ (PKK) နှင့် လွတ်လပ်သော ကာဒစ္စတန်ပါတီ (PJAK) တို့သည် တူရကီ အစိုးရနှင့် အီရန်အစိုးရတို့ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက် နေခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာခဲ့ပြီ။ ၎င်းတို့၏ အခြေခံစခန်းများကို အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ထားရှိကြ သည်။ တူရကီနှင့် အီရန်အစိုးရတပ်များက ထို ကာ့ဒ်အခြေစိုက် စခန်းများကို လေကြောင်းမှလည်းကောင်း၊ အမြောက် ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်၍လည်းကောင်း ပုံမှန်တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းလေ့ရှိသည်။ ကူဝိတ်နိုင်ငံနှင့် တင်းမာမှု ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်ဒမ်ဟူစိန် ၏ စစ်တပ်များ ကူဝိတ်နိုင်ငံတွင်း ၀င်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ချိန်မှစ၍ အီရတ်- ကူဝိတ်ဆက်ဆံရေးမှာ မကောင်းခဲ့ပေ။ နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်မှုမှာ ယခုအထိ ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသေးချေ။ ကူဝိတ်နိုင်ငံက ကြီးမားသော ရေနက် ဆိပ်ခံကြီး ဆောက်လုပ်နေသဖြင့် အီရတ် နိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကို ပိတ်ဆို့ နေသည်ဟု အီရတ်နိုင်ငံက ပြောဆို ကန့်ကွက်လျက်ရှိသည်။ ယနေ့ အီရတ်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်စခန်း သုံးခု၌ အမေရိကန်စစ်သည် ၆,၀၀၀ သာ ကျန်ရှိတော့သည်။ သောင်းကျန်းမှု အထွတ်အထိပ်အချိန် ကာလက အမေရိကန်စခန်း ၅၀၅ ခုတွင် စစ်သည်စုစုပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ နီးပါးအထိ ရှိခဲ့သည်။ ယခု ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် အီရတ်မှ အမေရိကန်စစ်သည်အားလုံး ရုပ်သိမ်းသွားကြတော့မည် ဖြစ်သည်။Myanmar Daily MailMyanmar Express
အရည်အချင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်မည်
ထူးခြားတတ်မြောက်မှုရှိသည့် အရည်အချင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများအား နိုင်ငံတော်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ၏ ရှမ်းပြည်နယ် ခရီးစဉ်၌ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိခြင်းမှာ အစဉ်အလာ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ပညာရေး လေ့လာသုံးသပ်အချို့က မှတ်ချက်ပြုကာ ထောက်ခံကြိုဆိုမှုများ ပြုလုပ်လိုက်ကြကြောင်းလည်း သိရသည်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနမှ ကထိက ဆရာမတစ်ဦးက "ဒီလို လုပ်ဆောင်ပေးရင် ဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းသာမိမှာပဲ။ ဘယ်သူမဆို မိမိတို့အားစိုက်၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာတော့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ အသိအမှတ် ပြုခံချင်ကြတာက ဓမ္မတာပဲ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ ကျောင်းသားကို သာမန်စာတတ်ရုံ၊ စာမေးပွဲအောင်ရုံ လုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိနေတာကြောင့်ပါ" ဟု ပြောသည်။ ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်လက်ထက်၌ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အဆင့်အနေအထားများအား မြှင့်တင်ချီးမြှင့်ခြင်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းများ ရှိခဲ့သော်လည်း သင်ကြားနိုင်သည့် အတိုင်းအတာပေါ်တွင်သာ ရှိခဲ့ပြီး သင်ကြားရေးပေါ်တွင် အခြေခံသည်မျိုး သည်မှာ မရှိခဲ့ကြောင်း ထို့အတွက် ဤသည်မှာ ပထမဦးဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့ပညာရေး၌ နှစ် ၃၀ ကျော် တာဝန်ယူခဲ့သူ အငြိမ်းစားကျောင်းဆရာကြီး တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ မြန်မာ့အခြေခံ ပညာရေးသမိုင်း တစ်လျှောက်၌ လက်ထောက် ဆရာ၊ ဆရာမ အဆင့်များဖြင့်သာ မည်သို့မျှ မပြောမဆိုခဲ့ဘဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုများဖြင့် သင်ကြားပေးနေသည့် ဆရာမများ ရှိခဲ့ပြီး ရထားသည့် ရာထူးအဆင့်အတန်းဖြင့်သာ ချို့တဲ့စွာ အငြိမ်းစားယူသွားခဲ့သူ ရှိနေခဲ့သည်ကို အထင်အရှား တွေ့နေကြရကြောင်း၊ တိုးတက်မှု မရှိသည့် နေရာများ ဖြစ်နေသော်လည်း နာ ၃ နာဖြင့် ဆက်လျှောက်နေသူများကို ယခုကဲ့သို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ တံဆိပ်များ ချီးမြှင့်မည်ဆိုပါက ကျေနပ်အားရ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခု ရရှိသွားစေမည်ဟု ဆရာကြီးများက သုံးသပ်မှု ပြုကြသည်။ သင်ကြားရေးပေါ်တွင် အခြေခံကာ ပေးအပ်ဖွယ်ရှိနေသည့် အဆိုပါ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့နှင့် တံဆိပ်တို့အား အရပ်သားအစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ချီးမြှင့်နိုင်မည်ဆိုပါက မြန်မာ့ပညာရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အထောက်အကူကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးလောကရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်ကြောင်း မြန်မာ့ပညာရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ အချို့က ထောက်ပြကြသည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။Myanmar Daily Mail
မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ရုရှားတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လာရောက်လေ့လာ
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆မြန်မာဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ရုရှားလုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်လေ့လာ မှု ပြုလုပ်နေကြောင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။"ဟိုတယ်ဘက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် လာကြည့်သလို ရုရှားတိုးတွေ လာဖို့အတွက်ကိုလည်း လေ့လာကြတယ်၊ သူတို့တွေက ဒီနှစ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လာလေ့လာကြတဲ့ သူတွေ" ဟု ငွေဆောင် ဟို တယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြော သည်။လတ်တလောတွင် ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ မဖွင့်လှစ်ရသေးသော ဟိုတယ်နှစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် လာရောက်လေ့လာမှု ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းထံမှ သိရသည်။ရုရှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသူ များဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်လည်း အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုရန် စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာ ရုရှားဧည့်သည်များ ဝင်ရောက်လာမှု များပြားလာနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ သိရသည်။"ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ရုရှားတိုးတွေ ဒီနိုဝင်ဘာမှာ ဝင်လာကြတာများတယ်၊ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဥရောပဘက်ကတိုးတွေ ဒီထက်ပိုဝင် လာနိုင်မယ်" ဟု ပြောသည်။ရုရှားခရီးသည်များမှာ ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ အင်းလေးသို့ အများဆုံး သွားရောက်လည်ပတ် ကြပြီး ပြည်ပဧည့်များထဲ၌ ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အလတ်စားအဆင့်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်ခန့်က စတင်လာရောက် လည်ပတ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုရှားဧည့် လမ်းညွှန်တစ်ဦးက ပြောသည်။"ရုရှားတွေက အခုနှစ်မှာ ပိုပြီးအလာများတယ်၊ ဒီနှစ်လာတဲ့ ရုရှားတွေက ဗီယက်နမ်ဘက်ကနေ လာကြတာများတယ်၊ အခုလအတွက် ရုရှားဧည့်လမ်းညွှန်တွေ လိုနေလို့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေ လိုက်ရှာနေရတယ်လို့ ကြားတယ်' ဟု ၄င်းကပြောသည်။လက်ရှိတွင် မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ရုရှားခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေမှုများ ရှိနေပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရုရှားဧည့်သည်များ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမည် ဆိုပါ က လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ရှိနေသော ရုရှားဧည့်လမ်းညွှန်၂၅ ဦးခန့်နှင့် လုံလာက်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၄င်းကသုံးသပ်သည်။ဝေယံမိုးမြင့်Myanmar Daily Mail
အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ် - ၃ (အချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက် သက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ)
Zaw Moe Aung ကျွှန်တော် နည်းနည်းကြားဘူးပါတယ်....ကိုယ့်အချင်းချင်း စစ်အစိုးရ သူလျှိုပါဆို အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းပေါ့....အဲဒါကို သေသေချာချာ ထုတ်ဖော်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဗျ....အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်း အာဏာရူးဖြစ်သွားသူတွေအကြောင်းတွေ သိချင်ပါတယ်။ ကျောင်းသား ၁၀၀ ကျော် ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်တယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။သူ ဇာ လွင် နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်ရင်း အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အပါအ၀င် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ရဲဘော်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လည်း သားကောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါလျက်နဲ့ နှောင်းလူတို့ သိဘို့ တစိုးတစိမှ မတို့ မထိခဲ့ပဲ၊ ရေငုံနေခဲ့တဲ့ မိမိကိုယ် မိမိကြည့်မိတဲ့ အခါ အပြစ်မကင်းသလို ခံစားရတဲ့ စိတ်က တရွရွ ကိုယ်ပေါ် ပြေးလွားနေတာမို့ တခါက တရွရွ ပြေးလွှားခဲ့ဘူးတဲ့ သန်းဂျီးမတွေ အကြောင်းကို ခုလို ချရေးမိတာ ဖြစ်ပါကြောင်း ၀န်ခံချက် ပေးပါတယ်။Sai Zaw they are hiding among us and act like holy man . i heard before that kind of story also but not complete and fade out .this is the time to speak out for new generation and the one who gave their live.Khin Zai စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်တွေပါဘဲ..။လူအများသိနိင်အောင် ဆက်ရေးပြီးသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ ပါါရေးသားသင့် ပါတယ်..။Chan Myae ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတော့...... ခံစားမှုက နာကျင်ရတာရော ရယ်မောစရာတွေရော ရောပြီး ခံစားရပါတယ်........အတိတ်မှာ မှားခဲ့သမျှ အခုလက်ရှိ မှား သင်ခန်းစာတွေပါပဲဗျာဒီလို အမဲစက်ကြီးတွေ ကနေ လက်ရှိ အရှိတရားကို သတ္တိရှိရှိ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေ တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုဦးညွှတ်ပါတယ်.....ဗျာ ကိုထိန်လင်း စာတွေများများရေးနိုင်ပါစေShwe Zaw Naing အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရင် သမိုင်းအမှန်တွေကိုဖေါ်ထုတ်ကျမှာပါ.......Myo Chit ကျွန်တော်လည်း ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ။ အာဏာရှင်တွေဘက်က ပြောစရာ ထောက်စရာ အကျည်းတန် သွားရတာတွေက တော့ အများကြီးပါဘဲ။ ဘာကြောင့် ဘယ်သူ့ ကြောင့် ဆိုတာတော့ မသိချင်တော့ပါဘူး။Sai Maungmaung ဖတ်ရတာ အတော်လေးကို စိတ်ထိခိုက်မိပါတယ်...ဘယ်သူတွေကို အပြစ်သွားတင်ရပါ့မလဲ... စစ်အစိုးရကို တော်လှန်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် တော်လှန်ရေးလုပ်ပေမယ့် ကြားထဲက မြေဇာပင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေ ... မှတ်တမ်းမတင်လိုက်နိုင်တဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေ.... သြော်... အရင်းအနှီး အတော်ကြီးပါလား.....Nyunt Thein ထိုင်း.....နယ်စပ်မှာလဲ.....မြန်မာပြည်.....ပြန်မည့်...ကျောင်းသား....တတိယအသုတ်မှ....၅၇-ယောက် အားလုံး အသတ်ခံရတာ....ဘယ်သူမှမဖေါ်သေးပါ.....Moe Sal တရားခံတွေလဲ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတုန်း တရားလိုတွေ ပေါ်မလာသေးနိုင်တဲ့ အမှုပေါ့ဗျာ..အဲ့ဒီတုန်းက တရားခံတွေ တာဝန်ရှိသူတွေ ခုလဲ တွင်ကျယ်နေတုန်း အရေးပါနေတုန်း နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါ များနေတုန်း ..Moe Sal ခက်တာက ရန်သူအားရမှာစိုးလို့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း ဖြစ်မှာစိုးလို့ ကျောင်းသားတွေကြား ကွဲပြားကုန်မှာစိုးလို့ နဲ့ အခြားအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ သူတွေအများကြီးရှိနေသေးပါတယ် ကိုထိန်လင်းက အစပြောတာပါ ထောက်လှမ်းရေးပါလို့ ၀န်ခံခဲ့ပြီး ယခုတိုင်အသက်ရှင်နေတဲ့ သူတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒီတုန်းက အာဏာလုတာကို အာဏာလုတယ်လို့ ၀န်မခံပဲ ရက်ရက်စက်စက် ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ လူမဆန်တဲ့ ညှင်းပမ်းမှုတွေ နအဖ စစ်အုပ်စုကတောင် မလုပ်ခဲ့တဲ့ ညှင်းပမ်းမှုတွေ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ နဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာပါ။Hlaing Bwa ကျောင်းသားဟား ကျောင်းထဲမှာ မြောင်းထဲမှာ ထောင်ထဲမှာ တောထဲမှာ ... စာရင်းမဲ့အင်းမဲ့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ ... ခံစားခဲ့ရတာတွေကပြောလို့ မကုန်နိုင်ပါဘူး .... အခံစားရဆုံးကတော့ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားအမည်ခံအချင်းချင်း ပက်ပက်စက်စက်လုပ်ရဲ့ခဲ့ကြတာပါပဲ .... သတ်ခဲ့တဲ့သူတွေ သတ်ဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့တဲ့သူတွေ မျက်မြင်သက်သေတွေ ကနေ့ အချိန်အထိကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲပါ - လှိုင်ဘွားကိုယ်တိုင် (၂) ကြိမ်ထက်မနည်း အသတ်ခံရဖို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ... (သည်အထဲမှာ တော်လှန်ရေး သမားဆိုသူတွေ အင်မတန်အံ့သြလောက်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ ဖေါက်ပြန်စွပ်စွဲမူတွေရှိခဲ့ပါ တယ် .... မြ၀တီရဲခေါင်လိုလူမျိုးတွေအထိ ကျောင်းသားတွေအပေါ်လူမျိုးစုက သတ်အောင်စွပ်စွဲတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းပါ - သူအခုသြစတြေလျှမှာ အသက်ရှင် နေဆဲပါ .... ကျွန်တော့်ကို မြ၀တီရဲခေါင်စွဲချက်တင်ချိန်မှာ အခြားကျောင်းသားတွေ RIT 141 က ... ကိုရင်အေးလိုလူတွေရှေ့ မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ ... ဒေါက်တာတူးဂျာတို့ ရှေမှာ သူတို့ သက်သေရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ ) ... အသက်နဲ့ ရင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးမို့ ဘ၀မှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး - တော်လှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူချင်းပြန်သတ်လို့ သေ ရတာ သိပ်ရင်နာဖို့ ကောင်းပါတယ်။ (ခင်ညွန့် ကထောက်လှမ်းရေးတွေလွှတ်ထားတယ်လို့အပင်းထည့်တဲ့ စကားမျိုးတဘက်လှည့်နဲ့ သုံးချိန်မှာ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ အာဏာလုတတ်တဲ့သူတွေနဲ့လူမျိုးစုတွေအတွင်း အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသား ဟာ တိုက်ပွဲကျခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအရည်အတွက်ထက်ပိုများမယ်ထင်ပါတယ် ...)MrMaung KoThet အဲဒီ ကိုထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ အခု ယူအက်စ်က ထွန်းအောင်ကျော်က မတူဘူးလား။ ကျနော်က တယောက်တည်းပဲမှတ်လို့။ ။ သမိုင်းတကွေ့က အမှန်တွေကို သိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ။ ။Nay Zaw မတူပါ။မန္တလေး ထွန်းအောင်ကျော်သည် ကချင်တောတွင်းတွင် အသတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။Maung Maung Wann အဲဒီ့ဖြစ်ရပ်ထဲက တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ မျိုးဝင်းကတော့ တောထဲမှာသေပါပြီ၊ သံချောင်းက အခု သာယာဝတီထောင်မှာ သေဒဏ် ( ၅ ) ကြိမ်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရပါတယ်...သူ့ကို တောထဲကနေ အရှင်မိလာတာ....ကျောင်းသားရဲဘော်တွေကို နထင်တေ့ ၊ ပစ္စတိုနဲ့ပစ်သတ်ခဲ့သူပေါ့.....ကျောင်းသူ ခင်ချိုဦးကို သူ့ရှေ့မှာ မုဒိန်း ကျင့်ခိုင်းပြီး၊ ပြီးမှ သေနပ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တယ်.....ဒီ ဖြစ်ရပ်မှန် မှတ်တမ်းတွေ ကမ္ဘာသိအောင် ဖော်ထုတ်ကြတော့မှာပါ......။ တချို့ကောင်တွေက မသိသလိုနဲ့ အခုထိ ခေါင်းဆောင်လိုလို ဘာလိုလို လူတွင်ကျယ်လုပ်တုန်း......လက်တွေ့ပါဝင်ပါတ်သက်သူများ ထပ်မံ ဖော်ထုတ်သင့်ပါပြီ။Khin Lay Nge လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ဘယ်နေရာမှ မကင်းနိုင်ကြပါလားနော်....UZa Wana ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မနှစ်မြို့ရင် သူတို့ကိုတရာဥပဒေ ရှေ့ရောက်အောင် ဝိုင်ဝန်းပို့ဆောင်ရမယ် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူဟာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ် သူကို ယဉ်ကျေးတဲ့လူးသားတွေက ဥပဒေ နဲ့အညီ စီမံသင့်တယ် သိသူများကဆက်လက်ဖော်ထုတ်ိကြပါ အရိုင်းအစိုင်းတွေလိုအချင်းချင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို မမေ့မပျောက်ရအောင် စာတွေရေးကြပါKo Win Naing ပဲခူးရိုးမထဲက ဗကပ အဖြစ်ထက်တောင် ဆိုးရွားလှချည်လားဗျာ၊Aung Moe Win ကိုချိုကြီးရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြီး ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကိုက်ခိုင်းထားတယ်။ ကိုချိုကြီးက နောက်ဆုံးခေါင်းဖြတ်မသတ်ခံရသည်အထိ၊ ကျောင်းသားကွ ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး ဆို အော်ပြီး ခေါင်းပြတ်သွားတယ်Aung Moe Win ကိုမောင်မောင်ဝမ်း- ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတာ သက်ရှိထင်ရှားကျန်နေတဲ့ အဓိက ရာဇဝတ်ကောင်လေ။ လာမယ်ဗျာ။ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံနဲ့။UZa Wana အမှန်းတရားမြတ်နိုးတဲ့ ယဉ်ကျးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဝင်များပူးပေါင်းကြပါ ဒါဟာ အသက်စွန့်သွားရတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက်ကျုပ်တို့ တာဝန်ကျေတာပါပဲ -ပဲခူးရိုးမတုန်းက လို တာဝန်ရှိသူတွေက မှာပါတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ယုံနဲ့ ကျေနပ်ရမည့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးLwin Aung Soe စိတ်မကောင်းရတာထက် ရင်နင့်ရတာက အများကြီးပိုပါတယ်။ (ခုအချိန်ထိ) ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးသမျှမှာတော့ အမှန်တရားတချို့ ထပ်ထွက်လာတာတွေ သတိပြုမိပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ထုတ်မပြောဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ် ကြိတ်မှိတ်မြိုသိပ်ထားရတဲ့ ခံစားမှုတွေ၊ ဖုံးဖိထားရတဲ့ အမှန်တရားတွေကို ထုတ်ပြောပေးသူတွေဘက်ကို ကျနော် အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒီအမဲစက်ကြီးကို ထိန်ချန်ပြီး ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်သွားရင် အန္တရာယ် အလွန်ကြီးလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။Aye Aye Soe Win Whatathing! Ko Mg Mg Wann and writer U Htein Lin...By presenting this story to your fellows, you contributed seriously to all, all, dead or alive...thanksamillion...Ma ngo chin kya bu lar??? it is very overwhelming to read this..hard to explain..Yan Shinn Oo ‎@Aung Moe Win, are you confusing Ronald Aung Naing from Dr. Naing Aung, Khin Ohn Mar's husband? Naing Aung hasalot to answer. Well If you are confident what you said, you better not to forget to add another one, Naing Aung into your list.Aye Aye Soe Win Ko Aung Moe Win , when is စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ coming? This very factual literature on this disturbing tragic history is never needed than now..Aung Moe Win Yan Shinn Oo- ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို သတ်ပြီးတဲ့နောက် မြောက်ပိုင်းမှာ ဥက္ကဋ္ဌ တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလေး ဆိုတဲ့သူ။ ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဆိုတာ အောက်ပိုင်း အေဘီ ( ဗဟို) ကလူ။ မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော်စခန်းအပါအဝင်၊ အောင်နိုင်လေး နဲ့ ဒေါက်တာ နိုင်အောင် ကချင်ပြည်နယ်ကို သွားတုံးကပုံတွေက အစ တင်ပေးလိုက်မယ် ဟုတ်လား။ တခုချင်းစောင့်ဖတ်ပါ။ အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး သိမ်းထားတဲ့ အရာတွေကို တခါတည်းဖတ်လိုက်ရင် ပေါ့သွားမှာ စိုးလို့ပါ။Yan Shinn Oo Aung Moe Win- Thanks for your prompt reply and giving me more information about Ronald Aung Naing as I did not knowledge regarding with him. But I do know Naing Aung also crminal to be tried in the future.Anyway thanks for that.Moe Sal သူတို့ကပဲ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလို လုပ်နေကြတဲ့ လူသတ်သမားတွေ ကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ..စုစီးပြီး ဖေါ်ထုတ်ကြရင် နောက်တချိန်မှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေက ရှောင်နိုင်မှာပါ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို လက်လွတ်စပါယ် ကျူးလွန်ခွင့်ပေးထားလို့ ရာဇ၀တ်သားတွေ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နိုင်တာပါ..အေဘီ အင်အားနည်းလာစေတာ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ အများကြီးပါပါတယ်..Thar Swe ဒီသတ်ဖြတ်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက တလောက လက်နက်ချသွားတဲ့ သံချောင်း၊ သေသွားတဲ့ မျိုးဝင်းနဲ့ အရင်ဘီဘီစီ သတင်းထောက် လုပ်တဲ့ အောင်နိုင်တို့ပဲ။ သူနဲ့ အသတ်ခံရတဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော်က မန္တလေးမှာအတူတူ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ သံချောင်းတို့က မိုးညှင်းမိုးကောင်းအုပ်။ ကျန်ဒေသကလူတွေကို ဂိုဏ်းဂနနဲ့ချတာ။ အောင်နိုင်ကလည်တော့ သွားကပ်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုသတ်နေတာတွေကို ကေအိုင်အေက တချက် မတားဘူး။ အောင်နိုင်ဆိုတာက Ronald Aung Naing အခု ချင်းမိုင်မှာ။ သံချောင်း က လွတ်ရက်မရှိ ... သာယာဝတီထောင်မှာ ရောက်နေပြီ။ လက်ယျာထွန်းတို့ ကိုသိန်းတို့ ကိုခင်လှိုင်တို့ နဲ့တူတူပဲ။ ပြောမယ်ဆိုရင် သံချောင်း တယောက် ကျနော့် အမှုတွဲတွေနဲ့ အတူတူ သာယာဝတီထောင်မှာ ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ Ronald Aung Naing ကတော့ ကိုညိုအုန်းမြင့်တို့နဲ့ ပါတီပွဲတွေနွှဲနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့နေရတာပဲ။Moe Sal ဖေ့ဘုတ်မှာ ရော်နယ်အောင်နိုင် ရဲ့ ပျော်ရွင်မြူးတူးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေတင်ထားပါတယ် မြောက်ပိုင်း လူသတ်တရာခံတဦးကို ရှုစားနိုင်ပါတယ် မေးမြန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်.Maung Maung Wann မနက်ဖြန်မှာ....ကိုအောင်မိုးဝင်းက အထောက်အထားအခိုင်အလုံ ဓါပ်ပုံ သတင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူ ခံခဲ့ရတဲ့ ကာယကံရှင်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရ...အပိုင်းလိုက် ဆက်တိုက် တင်ပေးသွားပါ့မယ်....ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ရှိတဲ့ ကာယကံရှင်များကိုတော့...ဗွီဒီယို ၊ ဓါတ်ပုံရိုက် အင်တာဗျူးလုပ်ဘို့ စီစဉ်နေပါတယ်။အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား သူ့ညီ ကိုဌေးနိုင်ကို သတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်း အခု နယ်သာလန်က ကိုဌေးတင့်က နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးအထိတင်မယ်လို့ ကြားခဲ့ဖူးတယ်။အခုအမှုရော အဲလို တင်လို့ရမရ ပြည်ပရောက် စီတီဇင် ဖြစ်နေသူများ၊ပညာရှင်ဖြစ်နေသူ မြန်မာပြည်ဖွားများ ဆွေးနွေးကြပါဦး။Zaw Moe Aung ကျောင်းသားများစွာကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ပစ်ဘို့ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အထဲက...ရောနယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့ ကောင်က...အခု...internews ဆိုတဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် သတင်းဌာနတခုမှာ လစာကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်နေတယ်လို့...အမေရိကားက အကိုတစ်ယောက်က လှမ်းပြောလာပါတယ်....ဘီဘီစီက ဒီလူသတ်မှု့ ကိစ္စကြောင့် အဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီး...အခုသူက ဒီသတင်းဌာနမှာ ပြောင်းလုပ်နေတယ်ကြားပါတယ်...လောလောဆယ်..ဒီလို သွေးစွန်းနေတဲ့ လူသတ်ကောင်ကို ဖြုတ်ပစ်ဘို့ ၀ိုင်းစာတင်ကြပါ.......၀ိုင်း လက်မှတ်ထိုး ဖြုတ်ချကြပါ....။Min Min Aung speechless with sad, sorrow, and tears after reading this article. How are we going to tell their moms??? တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကို လက်ကုတ်ပြီးဖြောင်ခိုင်တာတွေကိုတော့ ကြားခဲ့ဖူးတယ်...တချို့ သိတဲ့သူတွေပါသွားတာလဲ သိခဲ့ရဖူးတယ်... ကိုယ်ပါရောပါသွားမှာစိုးလို့လဲ တိတ်တိတ်လေးကြေကွဲခဲ့ဖူးတယ်... ရင်နဲ့မဆန့် မျှဝေခံစားမိပါတယ်...Nay Zaw ကိုအောင်မိုးဝင်းရေ..မြန်မြန်သာတင်ပါတော့ဗျာ...။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို လုပ်ကြံခံရပုံတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်လှပါပြီ။Nge Naing ABSDF ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ညီလာခံနဲ့ တိယအကြိမ် ညီလာခံ စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ မြောက်ပိုင်း လူသတ်မှုအကြောင်းကို ကြားဖူးခဲ့ပေမဲ့ အကျဉ်းချထားစဉ်မှာ အခုလို မယုံနိုင်လောက်အောင် လူသားမဆန်စွာ ညှင်းဆဲကြတယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မ အခုမှပဲ သိရပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ ဘယ်လို ပြောရမှန်းမသိ ပြောပြမတတ်အောင်ကိုကို ခံရသူတွေဘက်က ခံစားရတာ ကျွန်မရဲ့ မှန်သောစကားပါ။ ဒီနေရာမှာ ညှင်းဆဲခံရသူတွေဟာ အထင်မှားခံရတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ်ကို ရန်သူက စေလွှတ်လိုက်တဲ့ ရန်သူလူတွေ ဖြစ်နေရင်တောင်မှ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ABSDF လိုအဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ ဒီလိုညှင်းဆဲတာကို လုံးဝဆန့်ကျင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ရန်သူ အားပေးသလို ဖြစ်မှာ၊ ရန်သူအကြိုက် ဖြစ်မှာကို မလိုလားပေမဲ့ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း တဦးအနေနဲ့ ဒီမြောက်ပိုင်း ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားကို သိချင်တာတော့ အမှန်ပဲ။Maung Maung Wann ဒီကိစ္စမှာ ကျန်တာတွေ ခနထား သေချာတာတခုကတော့....လုံးဝကို အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေ ဘ၀ပျက် လူစဉ်မမှီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ အသေအချာပဲဗျ.....အဲဒီ သေဘေးက လွတ်လာပြီး မကြာခင်မှာပဲ...စစ်အစိုးရက အမှု့ဆင်ဖမ်းလို့ ထောင်နှစ်ရှည်လများ ကျသွားတာလည်း အသေချာပဲဗျ။ ဒီလူတွေရဲ့ဘ၀တွေးကြည့်ပါဗျာ...သူတို့လူသားတွေပါ။...ကျနော်ကတော့ သမိုင်းသိထားတဲ့သူတွေ တင်ပြတာကို လူထုသိအောင်လုပ်ပေးရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူထားပါတယ်။ ရှင်းစရာရှိတာတွေဆိုတာကတော့ ကျနော် ကာယကံရှင်မဟုတ်လို့....စောင့်ကြည့်ယုံမှအပါး အခြားမရှိပါဘူး.....အချိန်ထပ်ယူရဦးမယ်ဆိုတာကတော့....ကာယကံရှင် ( ပန်းချီ ထိန်လင်း ) ကိုယ်တိုင်က ဇာတ်ကြောင်းကို နမိတ် ပျိုးထားလေတော့...ခရီးက ဆက်ကြရတော့မှာပေါ့ဗျာ.......ပြည်တွင်းက လူတွေကလည်း သိချင်နေကြပါတယ်....ဒါ့ကြောင့်ပါ.........။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ကာယကံရှင်တွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲပါ။ ကျနော် ပထမအကြိမ်ထောင်ကလွတ်လာတော့....မြောက်ပိုင်းက လွတ်မြောက်လာသူ အများစုနဲ့ စမ်းချောင်းတိုက်ခန်းမှာ အတူနေခဲ့ဘူးလို့....သူတို့ ရင်တွင်း ခံစားချက် တွေကို ထပ်တူခံစားခဲ့ဘူးပါတယ်......အဲဒီကထဲက ထိန်လင်းနဲ့ ကျနော် အတူနေခဲ့တာပါ.....အာဏာရှင်ဆန်တာ...အာဏာရူးသွပ်တာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံမရလို့ပါ။ နိုင်ငံရေးအယူအဆအရ..ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်....အပြစ်မမြင်ပါ.....အာဏာရူး..အာဏာရှင်ဆန်တာကိုတော့...ဘယ်သူကိုမှ လက်ခံပေးလို့မရလို့ပါ....အခုအဖြစ်အပျက်က အာဏာရူးတာတွင်မက..လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုပါ ရက်စက်..လူပေါင်းများစွာ..ကို ရက်ရက်စက်စက် ဒုက္ခပေးခံရတဲ့ ကိစ္စကို နောက်မျိုးဆက်သစ်များ.....သမိုင်း သင်ခန်းစာယူနိုင်ရန် အလို့ဌာ...အခု ချိန်မှာ သိသင့်နေပြီလို့ယူဆပါတယ်...အနှစ် ၂၀ လုံလောက်ပါပြီဗျာ။ကိုရွှေ အိုး ဒီကိစ္စတွေ ပြန်ပေါ်လာတာ ဝမ်းသာတယ်၊ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ရင်း ကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်လို ရက်စက်ယုတ်မာကုန်တဲ့ လူတွေအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ သေချာသိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်မှာ။အရင် ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတွေက တစ်ဆင့်စကားဆိုတော့ ခိုင်လုံမှုရှိမရှိ အစ်ကိုတို့ ပြောတာနဲ့ပဲ တိုက်စစ်တော့မယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုချိုကြီးရဲ့ လက်ပြတ်ပြတ်ကို ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကိုက်ခိုင်းတယ်လို့လဲကြားဖူးပါတယ်။ စအိုထဲ ကျဉ်စက်အထည့်ရလို့ မသေခင် ပုတ်သွားတဲ့ ကျောင်းသား၊ ပြည့်တန်ဆာလောက်နီးနီး နာမည်အဖျက်ခံရပြီးပြီး အသတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသူ စသည်ဖြင့် လူမဆန်တဲ့ မိုက်ရိုင်းမှုတွေအကြောင်းလဲ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူသတ်မှုမှာ ပါခဲ့တဲ့ အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့တဲ့ လူတစ်ချို့လဲ ဒီကနေ့မှာ ကောင်းစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမိုင်းမှန်တွေ အမြန်ဆုံးပေါ်ပါစေ။ ယုတ်မာခဲ့သူတွေ ထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပြန်ခံရပါစေ။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အခါအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည်
အောင်ရှင် အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၄၉ ( ၂၃ - ၂၉ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သည့် အခြားပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်နေစဉ်။ဓာတ်ပုံ - အောင်ရှင် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီသည်အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အခါ အားလျော်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်က ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့ ပါတီရုံးသို့ ဖိတ်ခေါ်၍ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ 'တီးပါတီ' ဟုဆိုသော အဆိုပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် ပြည်ထောင် စုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအကြား အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသာဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများအား စည်းရုံးဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ် ပါဟုလည်း တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်က ပြောသည်။ "နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်အောင် တွေ့ဆုံတဲ့သဘောပါပဲ။ အားလုံး ဆန္ဒကိုရယူနိုင်ဖို့ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေး တဲ့ သဘောမျိုးပါ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံးတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်လည်း အခါအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံသွား မှာပါ"ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ ဦးဝင်းမောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တက် ရောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပါတီခေါင်းဆောင်များသည် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ တရားစီရင် ရေးကိစ္စများနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အကြောင်းတင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)က နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် ပါတီရုံးဖွင့်လှစ်ရန်မြေနေရာနှင့် အစိုးရထံမှ ဘတ်ဂျက် ခွဲတမ်းရရှိရန်တင်ပြခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံရေး ပါတီအချို့ကလည်း ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် လွှတ်တော်အမတ်များမှ တစ်ဆင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြနိုင်ပြီး တိုင်းဒေသ ကြီးက လာမည့်လွှတ်တော် အစည်း အဝေးများတွင် ဥပဒေပေါင်း ၁၂ ရပ်ကို တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပါတီ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်ပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ် များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ၊ ၀ံသာနုဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနှင့် (၈၈) ပြည်သူ့အင်အားစု ပါတီတို့မှ ပါတီခေါင်းဆောင်များတက် ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဖိတ်ကြားထားသော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီက တက်ရောက် ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အင်အား ၁၉ သိန်းကျော်ရှိပြီး ပါတီဝင်ကတ်ပြား ရှစ်သိန်းကျော် ပေးအပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။Myanmar Daily Mail
(အေအက်ဖ်ပီ) ၀င်းသော်တာ ဘာသာပြန်သည်။ အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၄၉ ( ၂၃ - ၂၉ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁) မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်သစ် ကင်ဂျုံအန်း ဗီဒီယို လုပ်ငန်းတစ်ခုအားသွားရောက်စစ်ဆေးနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-အေအက်ဖ်ပီအသက် ၆၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင် ထားသည်ဟု ဆိုသော မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ကသောင်းကနင်းဖြစ်လာ မည့်အရေးကို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိုးရိမ်နေသည့်အကြားက ကင်ဂျုံအီးလ်၏သားဖြစ်သူ ကင်ဂျုံအန်း အား 'မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားတို့၏ မဆုတ်မနစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ အတွေး အခေါ် ယုံကြည် ချက်များရဲ့ဒေါက်တိုင်' အဖြစ် ဖော်ပြကာ ဆက်ခံသူအဖြစ် ကြေညာ ခဲ့သည်။ "ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ စစ်တပ် နဲ့ ပြည်သူ လူထုတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ တော်လှန်ရေးကြီးရဲ့ ဆက်ခံသူလည်းဖြစ်တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကင်ဂျုံအန်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ရှေ့တန်းက ရပ်တည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ "ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး၊ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူတွေက ကင်ဂျုံအန်းရဲ့ ခေါင်း ဆောင်မှုနောက်က သစ္စာရှိစွာနဲ့လိုက်ပါသင့်တယ်" ဟု မြောက်ကိုရီးယား၏ တရားဝင်သတင်းဌာနတစ်ခုက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ဘွဲ့ရ တစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိ ကင်ဂျုံအန်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင် ၎င်း၏ဖခင် လေဖြတ် ဝေဒနာ ခံစား ရပြီးနောက် ရေပန်းစားထင်ရှားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်က ၎င်းသည် ကြယ်လေးပွင့်အဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ထိပ်တန်းအာဏာရ ပါတီတွင်လည်း နေရာရလာ ခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ် သေဆုံးကြောင်း ကြေညာသည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့၌ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေဒေသတွင် တာတိုပစ်ဒုံးကျည်ဖြင့် စမ်းသပ် ပစ်ခတ်မှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းကို တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ် အာဏာပိုင်များက စောင့်ကြည့် အကဲခတ်လျက်ရှိကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား သတင်းဌာနမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားနှင့် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ လီမြောင်ဘတ်တို့သည် အမျိုးသားလုံခြုံ ရေးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကို ဂရုတစိုက် သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က တယ်လီဖုန်း ဖြင့်ဆက်သွယ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် တည်ငြိမ်ရေး နှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၏ ခိုင်မာသော ကတိက၀တ်ကို သမ္မတအိုဘားမားက ထပ်လောင်းအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာ ချက်တစ်စောင်၌ ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က ကိုရီးယားကျွန်း ဆွယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ သာယာဝပြောမှုနှင့် လုံခြုံမှု အဓွန့်ရှည်သော ခေတ်သစ် တစ်ရပ်ထူထောင်ရန် မြောက်ကိုရီး ယားခေါင်းဆောင်သစ်ကို တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံ ရေးမရှိသော ဂျပန်နိုင်ငံကလည်း ကင်ဂျုံ အီးလ် သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍၀မ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး တစ်ဖက်တွင်လည်း အရေးပေါ် လုံခြုံရေးအစည်း အဝေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်း အထီးကျန် နေထိုင်သော မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အလှည့်အပြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ရန် မျှော်လင့်ချက်ကြီး လျက်ရှိသည်။ ပေကျင်းတွင် သမ္မတဟူကျင်တောင်က မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ၀မ်းနည်းကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ တစ်ခုတည်းသော အဓိကမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအရ အားထားရ သောနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကင်ဂျုံအီးလ်၏ ဈာပနကို ပြုံယမ်းမြို့ တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထိကျင်းပ မည်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံခြားကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များကိုမူ ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုပေ။ နိုင်ငံသားများ၏၀မ်းနည်းပူဆွေးကြောင်း ပြသခြင်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။Myanmar Daily MailMyanmar Express
ရှေ့နှစ်တွင် ဘဏ်စနစ် ပိုမိုတိုးတက်ကျယ်ပြန့် လာမည်ဟု ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ မျှော်မှန်း
အေးသီတာကျော် အတွဲ ၂၈ ၊ အမှတ် ၅၄၉ ( ၂၃ - ၂၉ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁) သမ၀ါယမဘဏ်ခွဲ၏ ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲတစ်ခုတွင် အေတီအမ်စက်ကို တပ်ဆင်နေစဉ်။ဓာတ်ပုံ - ကောင်းထက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များ ဆိုင်ရာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လာမည့်နှစ်များတွင် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ ပိုမို ကျယ် ပြန့်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်း လောကက ပြောသည်။ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် အငှားဝယ်စနစ်၊ အလိုအ လျောက် ငွေထုတ်စနစ်(အေတီအမ်)၊ ငွေလဲ ကောင်တာများနှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့် လုပ်ငန်း လိုင်စင် စသည်တို့ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းတို့ ကြောင့် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုပိုလာခဲ့သည်။ "တိုင်းပြည် တိုးတက်တယ်ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးက လွှမ်းခြုံထားတာ။ ငွေကြေးပရမ်းပတာဖြစ်ရင် နစ်နာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်ကောင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဗဟို ဘဏ်တို့အနေနဲ့ တကယ့်ပညာရှင်တွေ ရှာရမယ့်အချိန် ဖြစ်လာပြီ။ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အခုအချိန်မှာ အရေးကြီးလာပြီ"ဟု ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ပြောသည်။ "ပိုပြီး ဖြေလျှော့ပေးလာတာ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပါဝင်လာတာ ကောင်းပါတယ်။ ပိုပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိလာတယ်။ အရင်က ရွှေအပေါင် ပစ္စည်းထားလို့ မရဘူး။ ငွေစုစာအုပ်ကို အပေါင်ထားပြီး ငွေချေးတာမျိုး လုပ်လို့မရဘူး။ အခု လုပ်ခွင့်ရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်လာနိုင်မယ်"ဟု အာရှ စိမ်းလန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်၏ အမှု ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အကြံပေး ဒေါ်ဥမ္မာစိန်က ပြောသည်။ ထို့ပြင် ဘဏ် ၁၁ ဘဏ်အား နိုင်ငံခြား ငွေကြေး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည့် အတွက်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အခြား အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်၏ အကြံပေး ဦးစိုးတင့်က ဘဏ်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုက်ခြင်းဖြင့် တခြား ပြည်တွင်းကဏ္ဍ များပါ တိုးတက်လာမည်ဟု ဆိုသည်။ ငွေလဲကောင်တာများ ဖွင့်လှစ်ပေး ခြင်းဖြင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တွင် အထောက်အကူပြုခြင်း၊ ငှားဝယ် စနစ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး အပ်ငွေ စာရင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်ခြင်းနှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို မြင့်မားလာသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ သမ၀ါယမ (စီဘီ)ဘဏ်၏ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ဦးဖေမြင့်က အလိုအလျောက် ငွေထုတ်စနစ် (အေတီအမ်) နှင့် ငှားဝယ် စနစ် စသည်တို့ကို ပြန်လည် ခွင့်ပြု ပေးခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တို့တွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရန်ရှိသည့် (၂၇)ကြိမ် မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲနှင့် အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံတို့ အတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် သဘောဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ "ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲလာတာ က မလုံလောက်သေးဘူး။ ပြောင်းလဲမှု တွေများပေမယ့် သိသိသာသာ တိုးတက် မလာသေး ဘူး"ဟု ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့သူ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ၎င်းက ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေအနေမှာ အနုတ်လက္ခဏာမှ သုညသို့ ရောက်လာပြီဖြစ်သော်လည်း အပေါင်း လက္ခဏာဖြစ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည် ဟု ပြောသည်။ "ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ အားယူနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဏ်စနစ်တွေက နိုင်ငံတကာကို အမီလိုက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ ကုန်သည်တွေ အတွက် ဘဏ်စနစ် ပွင့်လင်းလာရင် အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပွင့်လင်းလာမယ်။ အထောက်အပံ့ကောင်းတွေ ရလာမယ်"ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုဦးက ပြောသည်။Myanmar Daily Mail
အစိုးရသစ် လက်ထက် ငါးနှစ်တာ ကာလ အတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ဖော်ဆောင်မည်
အစိုးရသစ်လက်ထက် ငါးနှစ်တာ ကာလ အတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိ ရန် ဖော်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည် ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်သောင်းက မီဒီ ယာ များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရ ရှိရန် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် အမြန်ဆုံး ဆောင် ရွက်နေကြောင်း၊ ယခုအစိုးရသစ်သက်တမ်း မကုန်မီ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ "ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဘယ်လောက် ကြာမလဲဆိုရင် ဒီအစိုးရ သက်တမ်းမကုန်မီ လုပ်မယ်။ နောက် အစိုးရ မပေါ်မီမှာထာဝ ရငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်း ထားပါတယ်"ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ဖြင့် ဆောင် ရွက် မည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် ပြည် ထောင်စု အဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ "ပထမ အနေနဲ့ ပြည်နယ် အဆင့်ကနေ ဘာ လို့ ဆောင်ရွက် တာလဲဆိုရင် သူတို့နဲ့ အဆင့်တူ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေ၊ နေရေးထိုင်ရေးကိစ္စတွေ၊ လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေက တကယ်တမ်း တိတိကျကျ ဆောင်ရွက် ပေးရမှာက တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ကပါ။ ဗဟိုအစိုးရက နေပြည် တော်မှာ ပဲရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် ပထမ အဆင့် ကို ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ပါဆို ပြီး စီစဉ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်"ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆွေးနွေးရာတွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များချထားမည် မဟုတ် ဘဲ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုလည်း ဘာပဲ ဆွေးနွေး ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မထားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က လည်း ကြိုတင် သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ ဘူး။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုရှိ တယ်။ ချစ်ကြည်မှု ရှိတယ်။ တန်ဖိုးထားမှုရှိ တယ်ဆိုတာ ကိုပြတာပါ"ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ ထိုသို့ အဆင့် နှစ်ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ရာတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် တွင် နှစ်ဦး သဘောတူ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် နေထိုင် ခြင်း၊ လက်နက်ဖြင့် သွားလာခြင်း မပြုရန်၊ သွားလာမည် ဆိုပါက ကြိုတင် ညှိနှိုင်းမှုများပြု လုပ်ရန်၊ ဆက်ဆံရေး စခန်းများတည်ဆောက် ရန်တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွင် ပြည်ထောင်စု အတွင်းမှ ခွဲထွက်ခြင်းမရှိသည့် စိတ်ဓာတ်ရှိရန်၊ နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသည့် အရေးသုံးပါးကိုလက်ခံယုံကြည်ရန်၊ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင် ရွက်ရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးလုပ် ငန်းများ အား အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရန် တို့အား ဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရသည်။ သားလတ်Myanmar Daily Mail Myanmar Express
အပြစ်မဲ့အရပ်သားများအား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ...
အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ် - ၄ (မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုး...
အရည်အချင်းရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချ...
မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ရုရှားတို့ ရင်းန...
အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ် - ၃ (အချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက်...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အ...
ရှေ့နှစ်တွင် ဘဏ်စနစ် ပိုမိုတိုးတက်ကျယ်ပြန့် လာမည်ဟ...
အစိုးရသစ် လက်ထက် ငါးနှစ်တာ ကာလ အတွင်း တိုင်းရင်းသာ...
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (သထုံ) ဖွင့်လှစ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ မှ မြန်မာ...
နိုင်ငံခြားငွေ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်
ဒီနေ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကျဆုံး...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်မျှတစွာ ကျင်းပပေးမည်ဟု...
ဖော်ကြမယ်၊ အော်ကြမယ် - ၂ (မြောက်ပိုင်းဒေသ မှ အရိုး...
မဲခေါင်ဒေသခွဲနိုင်ငံများ စာချွန်လွှာသုံးခု လက်မှတ်ေ...
မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက် ကို ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြု
Aung Naing had admitted to the executions and kill...
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းမတိုင်ခင် အက်တာနက် မြန်နှုန်းမြှင့်ပေ...
လိုနေတာက အ၀တ်နဲ့စားစရာ ရလာတာက ထောင်စရာမိုင်း
လှည်းတန်းဗုံးကွဲ၊ တစ်ဦးသေ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
အစိုးရသစ်လက်ထက်၌ အာဆီယံနှင့်ပတ်သက်သည့် ၀န်ကြီးအဆင့...
Killing fields of ABSDF under Dr Naing Aung and Dr...
နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီး စီမံကိန်း
အော်ကြမယ်၊ ဖော်ကြမယ် - ၁ (ကျောင်းသားများအားခေါင်း...
နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးဖွင့်ပွဲနှင်...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော မြန...
မောင်း​သူမဲ့​​လေယာဉ် ပြန်​ပေး​ရန် အ​မေရိကန်...
ပါတီ (၄) ခု ပြည်ခိုင်ဖြိုး နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့
မြန်မာလူထု၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဖူးမြော်ကြည်ညိုမှုတို့အ...
ရင်ခုန်ပြောကြား အကယ်ဒမီစကား စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ...
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ ကွယ်လွန်
သန့်ရှင်းတဲ့ ဘာသာရေးအလုပ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ နိုင်ငံရေး...
'ရွှေည၀ါဆရာတော်ဆိုတာ ဘုန်းကြီးယုတ်ပါ...' တဲ့
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဥက္ကဌ ၏ တရားတစ်ပုဒ်
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အတွင်း ထိပ်တန်း သတင်းများ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် သုံးလကြိုတင်ြေ...
အောက်မေ့ဖွယ်ရာ မဲမထည့်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ (၁)
မန်းတွင် စွယ်တော် ဖူးမြော်သူ များသဖြင့် တည်းခို နေ...
ရန်ကုန်တွင် အထပ်မြင့် လူနေအိမ် ခန်းပါ ဈေး ၁၀ ခု ခန...
တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းပေါင်း (...